မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် လည်ပတ်ခဲ့ကြသည့် ပြည်ပနိုင်ငံသားများ မြဝတီနယ်စ? - Yangon Media Group
မြဝတီ၊ နိုဝင်ဘာ ၅
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းရှိ အထင်ကရမြို့များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြသော ပြင်သစ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ ပေါ်တူဂီ၊ အင်္ဂလန်၊ စပိန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် လူဇင်ဘတ်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွား ၅၆ ဦးသည် မော် တော်ယာဉ် ၂၈ စီးနှင့်အတူ နိုဝင်ဘာ ၅ ရက် နံနက် ၉ နာရီတွင် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မြဝတီ-မဲ ဆောက်ဂိတ်ပေါက်မှတစ်ဆင့် သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံများသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားကြကြောင်းသိရသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ခုနစ်နိုင်ငံက မိတ်ဆွေတွေ အခုလိုမြန်မာပြည်တွင်းမှာလေ့လာလည်ပတ်ကြဖို့ အွန်လိုင်းကနေ ချိတ်ဆက်ကြပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဘုံဘေမြို့မှာ တွေ့ ဆုံကြတယ်။ ပြီးတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနှံ့လေ့လာကြပြီး မြန်မာပြည်တွင်းလည်ပတ်ဖို့ ဘေဘုံမြို့ကနေ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်မှာ မော် တော်ယာဉ် ၂၈ စီးနဲ့စတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြတယ်။ မြန်မာပြည်တွင်းက မန္တလေး၊ ကလေး၊ ပုဂံ၊ အင်းလေး၊ ရန်ကုန်၊ ကျိုက်ထီးရိုးစတဲ့မြို့တွေ ကို ၁၂ ရက်ကြာလေ့လာလည်ပတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်ဟာ အရမ်းလှပသာယာတဲ့နိုင်ငံတစ် နိုင်ငံပါ”ဟု ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Mr. John filish ကပြောကြားသည်။
အဆိုပါအဖွဲ့သည် ယနေ့တွင် ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလေ့လာလည်ပတ်ကြပြီး ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် လာအို၊ ဗီယက်နမ်နှင့်ကမ္ဘော ဒီးယားနိုင်ငံများသို့ နိုဝင်ဘာ ၂၄ ရက်တွင် သွားရောက်လေ့လာကာ နိုဝင်ဘာ ၂၈ ရက်တွင် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှတစ်ဆင့် ကားများကို သင်္ဘောဖြင့်တင်ပေးလိုက်ကာ လူများမှာ လေယာဉ်နဲ့ပြန်လည် ထွက်ခွာကြမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ခုနစ်နိုင်ငံမှ နိုင်ငံခြား ခရီးသွား ၅၆ ဦးသည် သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့ ခရီးစဉ်များတင်ပြခဲ့ကြ ပြီး သက်ဆိုင်ဌာနများ၏ ခွင့်ပြုချက်များဖြင့် ယခုကဲ့သို့မြန်မာပြည်တွင်းလည်ပတ်သွားခဲ့ကြခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သီပေါမင်း ပါတော်မူနေ့ အထိမ်းအမှတ် စာပေဟောပြောပွဲ မော်လမြိုင်မြို့တွင် ကျင်းပရန် စီစဉ်နေ
လူဦးရေ တိုးနှုန်း ကျဆင်းနေသဖြင့် အမျိုးသား လူဦးရေမူဝါဒ ရေးဆွဲ ချမှတ်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်??